Mareykanka oo ciidamo cusub usoo diraya Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
NAIROBI, Kenya - Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay amar u ogolaanaya millatariga Mareykanka in ay mar kale boqollaal ka mid ah ciidamada hawl-gallada gaarka ah geeyaan gudaha Soomaaliya – taas oo meesha ka saaraysa go’aankii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald J. Trump.
Trump ayaa bishii Janaayo 2021, maalmo kahor inta uusan ka tegin xafiiska, Soomaaliya ka saaray dhamaan 700 boqol oo ciidan oo joogay gudaha dalka.
Mr. Biden ayaa sidoo kale ogolaaday codsi ka yimid Pentagon-ka Mareynka oo ku saabsan in la beegsado ku dhawaad ​​12 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab.
Tan iyo markii Biden uu la wareegay xafiiska Aqalka Cas, duqeymaha cirka ayaa inta badan ku koobnaa kuwa loogu talagalay in lagu difaaco 'ciidamada saaxiibada' ah ee wajahaya khatar degdeg ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Pentagon-ka oo la hadlay Wargeyska New York Times.
KEYDMEDIA ayaa ogaatay in dad badan oo shacab ah ay naftooda ku waayeen duqeymaha Mareykanka ee Droneska, waxaana inta badan AFRICOM sheegtaa inaysan khasaaro rayid ka dhalan howlgalladooda, balse taasi beenowday kadib markii ay hadleen ehelada dhibaniyaasha.
Wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa u aragta khatarta Al-Shabaab mid sii xoogeysatay mudadii duqeymaha diyaaradaha maqnaayeen, iyadoo Safiirka Mareykanka uu sheegay in khatarta Kooxdan ay ka xoog badan tahay sidii hore.
Ciidamadaan losoo dirayo Soomaaliya ma ahan kuwa ka qeyb-galaya dagaal toos ah, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo codsaday inaan la magacaabin.
Go'aanka uu soo saaray Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa dib u soo noolaynaya hawlgal furan oo Maraykan ah, walina ma cada shuruudaha keenista ciidankaan cusub.
Dowladda cusub ee Xasan Sheekh ayaa wali ka jawaabin warbixinta NYTimes.